I-Raspberry Pi Pico: i-SBC entsha encishisiwe futhi eshibhile | Kusuka kuLinux
I-Raspberry Pi Foundation yethule umkhiqizo omusha. Imayelana ne- Okusajingijolo Pi Pico, i-SBC entsha eshibhile ejoyina lezo ezikhona. Ngalokho, ukunikezwa kwamanje kuqinisiwe, kanye ne-Raspberry Pi 4 ne-Pi Zero, noma i-Pi 400. Manje, ifomethi entsha ingeyosayizi owehlisiwe, futhi ngentengo emangalisa ngempela: cishe u- $ 4.
Kulokhu kungu I-MCU noma i-microcontroller, isisombululo esilula nesincishisiwe sokusebenzisa konke okudingekayo ukuqhuba uhlelo olushumekiwe futhi silusebenzise kumaphrojekthi lapho usayizi nokusetshenziswa kubalulekile, njengamaphrojekthi wezokwelapha, ezezimoto, izimboni, amarobhothi, iziteshi zezulu, njll.
Ungase ucabange ukuthi lezi akuyona izindaba ezinhle, futhi kuyiqiniso ukuthi amapuleti ancishisiwe afanayo asevele ekhona. Kepha izindaba ezinkulu zingenye. I- I-Raspberry Pi Foundation igcine isimanga. Futhi kwenzeka ukuthi ibe ngumklami ongenamicibisholo wama-chips ayo, njenge-SoC ayifaka eRaspberry Pi Pico.
I-SoC eyakhelwe yodwa yaqanjwa ngegama I-RP2040. Ama-cores wokucubungula awazange aklanywe kusukela ekuqaleni, esikhundleni salokho sakhetha ama-cores anamalayisense e-Arm. Ngokuqondile, kusetshenziswe ama-cores amabili we-ARM Cortex M0 + ku-133Mhz. Kanye nabo, i-264 KB ye-RAM ne-2MB yesitoreji se-flash sekuqalisiwe, kanye ne-PIO (Programmable I / O) unit yokulingisa izixhumi ezinjengalezo zamakhadi we-SD, i-VGA, njll.
Qaphela! Ngoba abakaze babe yi-MDI ngobusuku obubodwa, njengoba eminye imithombo yezindaba ehlonishwayo ibonakala ikhombisa. Ngiyaphinda ngiyasho ukuthi ayinampahla, bamane bazilinganisela ekuklameni, hhayi ekukhiqizeni. Eqinisweni, i-Raspberry Pi Pico chip yenziwa kufayela le- Isisekelo se-TSMC, enendawo engama-40nm. Futhi kuzofanele sibheke ukuthi ngabe lokhu kungumkhuba wama-SoCs azayo, noma ngabe kuyinto ethize nje futhi bazoqhubeka nokusebenzisa i-Broadcom ...
Ngendlela, ubuchwepheshe be i-lithograph enedethiYebo, kepha akudingi okungaphezulu noma kunikezwe izici ezilula zalesi chip. Ngokwenzelwe yona, ingaphezu kokuhlangana kwayo.
Ngokuqondene nohlelo lokusebenza, iqiniso yilokho ngeke ukwazi ukufaka i-Linux noma abanye, njengakwamanye ama-SBC. Cha, lapha ungavele ufake izinhlelo ezizosebenza ngayo. Lokho wukuthi, ngalowo mqondo kufana kakhulu nebhodi le-Arduino.
Ungabhala imidwebo ngezilimi zokuhlela ezifana C noma iMicroPython kwi-PC bese uyilayisha nge-microUSB kwimemori ye-Raspberry Pi Pico yakho. Ngakho-ke, i-microcontroller izokwazi ukubakhipha futhi yenze imisebenzi kuzikhonkwane ze-GPIO.
Ngokusobala, ungalindeli izinzuzo ezinkulu. Ingabe i- ipuleti elinganiselwe ngoba iqondiswe ohlotsheni oluthile lwezinhlelo zokusebenza. Ngaphezu kokungakwazi ukufaka i-OS, uzophinde uhlangane namaphutha ngokuya ngokuxhumana okungenantambo ngenxa yobukhulu bayo obuncane.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Raspberry Pi Pico: i-SBC entsha eshibhile futhi eshibhile
Izinhlobonhlobo: Umphathi wephephadonga owusizo we-GNU / Linux Distros